Ganacsatada jaadka kenya oo dib loogu fasaxey in ay soomaaliya geeyaan. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Ganacsatada jaadka kenya oo dib loogu fasaxey in ay soomaaliya geeyaan.
Ganacsatada jaadka kenya oo dib loogu fasaxey in ay soomaaliya geeyaan.
Kadib muddo ku dhow 10 maalmood oo diyaaradaha qaadka Kenya ka qaada ee Soomaaliya geeya ay xayiraad saarneyd ayaa haatan waxaa dib loogu fasaxay in ay qaadka geeyaan dalka Soomaaliya mar kale.
Madaxda Kenya iyo Soomaaliya ee shalay Muqdisho uga qeyb qaatay shir madaxeedkii IGAD waxay ku heshiiyeen in xayiraada laga qaado diyaaradaha Kenya jaadka ka qaada ee Soomaaliya jaadka geeya. Waxay kaloo ku heshiiyeen in muddo bil ah gudaheed diyaaradaha Soomaaliya ka yimaada loogu ogolaado in toos ay u yimaadaan Nairobi.
Previous articleKa faa’iideyso Qiimo dhimista Shirkadda BECO/waa qiimo dhimis aan hore loo arag.
Next articleMadaxweynaha dalka Kenya Uhuro oo Egad ka dalbadey in Soomaaliya wax lala qabto.